Golaha Wasiirada Soomaaliya oo ka shiraya qorshe 100 maalmood ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Muqdisho: Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke, ayaa maanta furay kulan ay isugu yimaadeen golaha Wasiirada kaas oo socon doona mudo laba maalin ah, waxaana looga hadlayaa qorshaha mudnaanta koowaad u leh xukuumadda ee 100-ka maalmood soo socda.
Raysalwasaaraha ayaa sheegay in u jeedka laga leeyahay kulankaan ay tahay dar-dar galinta iyo isku xirka howlaha xukuumadda iyo in la xaqiijiyo adeegyada ay xukuumadu gaarsiinayso shacabka kuwooda ugu muhiimsan, sida nabada ku soo dabaalida dalka, dib u heshiisiinta, adeegyada asaasiga u ah bulshada, dhamaystirka maamul-u-samaynta gobollada iyo kobcinta dhaqaalaha.
Sidoo kale Raysalwasaaraha ayaa sheegay inuu garwaaqsan yahay iney jiraan caqabado dhanka dhaqaalaha iyo duruufo adag oo lagu shaqaynayo, isla markaan ay xukuumadda ka go’an tahay wax qabad iyo in laga soo baxo fulinta qorshaha boqolka maalmood, una soo gudbino shacabka wax qabad la taaban karo.
Nicholas Kay oo tegay Baydhabo lana shiray Shariif Xasan Sheekh